Ọ bụrụ na ị na-eji gị iPad dị ka ọtụtụ ndị eleghị anya ọ bụ gị Gaa ngwaọrụ n'ihi na dị nnọọ banyere ihe ọ bụla. Ma eleghị anya, ihe kasị mkpa na gị na iPad bụ gị music na vidiyo. Ị na-chọrọ ụda àgwà na-nso zuru okè otú i nwere ike na-enwe gị music na vidiyo. Nke bụ eziokwu bụ ụfọdụ n'ime ndị a mobile ngwaọrụ tinyere iPads na-adịghị nnọọ mma ụda àgwà. Dabara nke ọma n'ihi unu, e nwere ụfọdụ ngwa ọdịnala na-e mbo mbuli ụda larịị na gị iPad ma ọ bụ ndị ọzọ iOS ngwaọrụ. The obere nsogbu bụ na ụfọdụ n'ime ha na-adịghị nnọọ mma na ị ga-aga site a nnọọ ogologo ndepụta na-kacha mma mma olu booster.
Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime top 10 olu boosters N'ihi na iOS ngwaọrụ na ahịa. Buru onye na kasị mma suut gị chọrọ olu mma.
1. Kaiser ụda Audio Player (4.5 kpakpando)
Ọ na-atụle otu nke kasị mma olu boosters N'ihi na iOS ngwaọrụ. Ọ na-enyere elu àgwà na nnọọ ngwa ngwa olu boosting. Nke a bụ n'ihi na ọ pụrụ ịkwado ihe karịrị 4000 ụda frequencies na nwere elu mkpebi ụda playback ike. Ọ bụ Gaa ngwa n'ihi na ndị na-achọ a elu àgwà iPad olu booster ngwa.
4 ụdịdị nke na-aga n'ihu playback
Ị nwere ike ịgbanwee si ọkà okwu headphone ma ọ bụ headphone ka n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ airplay niile nnọọ mfe.
Ụda àgwà bụ ịrịba
Ọ na-arụ ọrụ na iOS ngwaọrụ, ọ bụghị maka Android
Na $9.99 na ọ bụ obere bit oké ọnụ n'ihi na ọtụtụ ndị
Ọ na-ubé mgbagwoju anya iji na pụrụ iwe oge ịmụta
2. Super oké Standard (3.4 kpakpando)
Na a ihe ezi uche price karịa Kaiser ụda, ụda Cloud awade a otu n'ime a ụdị music ahụmahụ. Nke a bụ n'ihi na ọ ga mbo mbuli ụda gị iPad ka a aba ụba n'ike n'ike bass zuru okè n'ihi na niile Genres nke music. Ọ na-nwere ike mbo mbuli video ụda dị ka nke ọma.
Na $4.99 a na ngwa bụ n'ime iru maka ọtụtụ ọrụ
Ọ nwere Bluetooth na Wi-Fi ikike
Ọ na-enye n'ezie ezi àgwà ụda
Adịghị arụ ọrụ na gụgharia music. Naanị iTunes ma ọ bụ twitter
3. Bass enyem (4.2 kpakpando)
Nke a kemfe ngwa bụkwa ezigbo ndị ndị na-achọ mbo mbuli ha music ahụmahụ. Dị ka aha-egosi, ọ bụ ezigbo maka gị ma ọ bụrụ na ị chọrọ mbo mbuli ukot àgwà nke ụda. Ọ na-arụ ọrụ maka iPads na iPhones na bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu.
Arụ ọrụ nke ọma mbo mbuli gbim àgwà nke ụda
Na-enye onye ọrụ zuru akara nke bass
Ị nwere ike ịgbanwe olu larịị nke kpọmkwem frequencies
Ọ na-pụtara na a ga-eji na ekweisi na mmasị ọkà okwu naanị
4. nhazi ụda (3.6 kpakpando)
A na ngwa na-enye onye ọrụ ikike nwere zuru achịkwa ụda mmepụta na ha iPad. Ọ nwere olu boosting ikike nke 12 decibels. Ọ na-abịa swipe akara, decibel akara ndị ọzọ mfe iji akara parameters.
Otu n'ime ndị kasị dị ike olu boosters na ahịa
Ụda mmepụta bụ ịrịba na a na ngwa
-Arụ ọrụ na apple nche na-iPhone
Na-arụ ọrụ na iOS ngwaọrụ. E nweghị Android version
5. SonicMax Pro (4.7 kpakpando)
Nke a bụ olu jirichaa ngwa n'ihi na ndị na-amasị ha music nnọọ oké. Ọ bụ maka iPad na iPod na-abịa na a ọrụ enyi na enyi interface.
Ọ na-mere site BBE pro a ụlọ ọrụ mara maka ọkachamara music ngwaahịa
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma mbo mbuli ụda
Ọ bụ nnọọ mfe hazi na ojiji
Ọ a mara ugboelu ruru ka a ofu ebe nchekwa ihihi
6. Stage Pass (4.8 kpakpando)
Nke a bụ # 1 kasị ebudatara olu boosting ngwa na Japan na # 6 n'ozuzu. Ọtụtụ ọrụ akọwa ya dị ka a otu n'ime a ụdị ahụmahụ. Ọ retails na $0.99 na na mepụtara Bitcount Ltd.
Ọtụtụ ndị na-ji ya-agba akaebe ya arụmọrụ
Ọ na-ọma e na mfe iji
Ọ bụ karịsịa mere maka na-ege ntị na-ebi ndụ music
7. Mpịakọta enyem (ma gụọ 2.3 st0ars)
Nke a free ngwa na-arụ ọrụ dị nnọọ ka mma dị ka ụfọdụ nke ọzọ dị oké ọnụ n'anya. Ọ na-enye onye ọrụ ihe integrated na olu akara interface nke enye gị ohere ịchịkwa olu nke gị music karịrị gị iPad si ike.
Ọ bụ ngwa ngwa maka download
Ọ na-arụ ọrụ nke ọma
Ọ nwere nnọọ ala fim n'etiti ọrụ
Ọ bụghị nnọọ pụrụ ịdabere na pụrụ ugboelu mgbe ụfọdụ
8. nhazi ụda Pro (4 Stars)
Nke a ngwa e mere gị ka mma mgbasa ozi ọkpụkpọ si ikike ma melite ụda àgwà. E mere ya na-eji na iPhone, iPad na iPod ngwaọrụ.
A nnọọ ọrụ enyi na enyi interface
23 ke wuru ọkachamara nsonaazụ ụda
Ị nwere ike mfe ịgbanwe àgwà nke ọdịyo iyi playback
Ọ ga-eri gị banyere $2.99 iji nweta a na ngwa
9. iBoom Mpịakọta Booster (2,7 kpakpando)
Nke a bụ ọzọ dị ịtụnanya ngwa n'ihi na ndị na-amasị ha music ibu oké. The ngwa enye gị ohere ịhọrọ larịị nke amplification na ị chọrọ. Ọ bụkwa ihe na ngwa na-e mere na-enyere ndị mmadụ aka na-anụ ihe isi ike.
Ọ bụ ihe na ngwa na-na-isi e mere iji nyere ndị na-anụ ihe isi ike
Ndị na-zụtara ya ka mma ha music ọkpụkpọ hụ na ọ dị bụghị bara uru
Ọ ga-eri gị $1.99 ibudata
10. nhazi ụda + (3.4 kpakpando)
Nke a version nke nhazi ụda ngwa bụ bụghị nanị na a music ọkpụkpọ ma a olu booster. Ọ na-arụ ọrụ iji nyere gị aka melite ogo nke ụda ị ga-esi. Ya-enye gị akara nke 5 dị iche iche gbalaga frequencies. Ị nwere ike iji ya nnọọ ọtụtụ nzacha na atụmatụ ime ka ndị kasị mma na egwu gị.
Ọ na-okpukpu abụọ elu dị ka a music ọkpụkpọ
Ị ga-esi na-akparaghị ókè ohere gị music n'ọbá akwụkwọ
> Resource> iPad> The top 10 Best Mpịakọta enyem ngwa ọdịnala n'ihi iPad